मनोरञ्जन – Page 90 – Fewa Times
झापामा सिल्भर स्टार म्युजिकल कार्यक्रम हुदै
यही फागुन २७ गते झापा दुधामडीमा सिल्भर स्टार म्युजिकल टुर २०१७ अन्तर्गतको म्युजिकल कार्यक्रम हुने भएको छ । फागुन ३ गते दार्जिलिङ सुकुनाबाट सुरु भएको टुर दार्जिलिङ हुदै झापा दुधामडीमा आइपुगेको हो । आमा होम केयर सहयोगार्थ उक्त टुरलाई युकेमा बस्नहुने गीतकार तथा समाजसेवी आनन्द दोवाली राईले प्रायोजन......
यी हुन् गर्लफ्रेन्ड हुनुका बेफाइदा !
गर्लफ्रेन्ड बनाउनु, डेटिङ जानु, रोमान्स गर्नु आफैंमा रोमाञ्चक कुरा हो । तर, गर्लफ्रेन्ड बनाएपछि जिन्दगी रमाइलो मात्र हुन्छ भन्ने छैन । यसको साइड इफेक्ट पनि छ । रोइहाल्ने बानी युवतीको हतियार हो, रुनु । यदि ब्वाइफ्रेन्डले उनीहरुको कुनै कुरामा सहमत भएनन् भने गर्लफ्रेन्ड रोइदिन्छन् । यस किसिमको बानीले......
एजेन्सी – ‘ए मएस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी’ मा धोनीको प्रेमिकाको भूमिकामा अभिनय गरेर चर्चा कमाएकी नायिका दिशा पटानी फिल्ममा शालीन छविमा प्रस्तुत भएकी छन् । आखिर यतिबेला उनलाई त्यही छवि घाँडो भइरहेको छ । जब उनी हालै आयोजित फिल्म फेयर अवार्डमा ग्ल्यामर देखिने पोसाकमा पुगिन् तब उनको एक्सपोजलाई लिएर भद्दा......
शिवंमको शुभमूहर्त दमकको आकाशेपुलमा
दमक – झापाको दमक स्थित आकाशेपुलमा शनिबार राजु गिरीको चलचित्र शिवंमको शुभमुहर्त गरिएको छ । राजु गिरी प्रोडक्सन र सुभेच्छा इन्टरटेन्मेन्नेटको प्रस्तुती शिबम् एक्सप्रदान चलचित्र हो । नेपाल बाहिरको पहिलो बनेको आकाशेपुलमा नायिका शुभेच्छा थापा, नबनायक सोहम भेट्वाल सहितका कलाकारहरुको सहभागितामा......
गायक प्रकाश कटुवालको “तोरिको बोटैमा” सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौँ – चर्चित गायक प्रकाश कटुवालको तोरिको बोटैमा बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । सुमधुर स्वरकी गायिका संगम लामिछाने र प्रकाश कटुवालको आवाजमा रहेको लोक दोहरी गीति एल्बम तोरि को बोटैले रिलिजको छोटो समयमा नै चर्चा कमाएको छ । लय तथा शब्द स्वयम गायक कटुवालकै रहेको गीतमा राजेश घिमिरेको छयांकन,......
लुट २ लाई दर्शकको मिश्रीत प्रतिकृया
केही बर्ष पहिले रिलिजमा आएको सिनेमा लुटको सिक्वेल लुट २ ले अहिले हाउसफुल ब्यापार गरिरहेको छ । सिनेमाको रिलिज हुनु अघिनै करोड क्रस गरेको सिनेमाको ठमेल बजारको राम्रो प्रतिकृया र चलेका कलाकारहरुको उपस्थितीले पनि सिनेमालाई आम दर्शकले राम्रो होला भन्ने अपेक्षा राखेका थिए । तर सिनेमा रिलिज भएपछि हलसम्म......
नागपञ्चमी र जनैपूर्णिमा एकै दिन यस्तो छ २०७४ सालको नयाँ पात्रो
काठमाडौँ – नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले विक्रम सम्वत २०७४ सालको पात्रो सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ पात्रो अनुसार आगामी वर्ष नागपञ्चमीकै दिन जनैपूर्णिमा परेको छ । समितिका सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद ढुंगेलले पूर्णिमाको दिन चन्द्र ग्रहण परेकाले त्यसअघि पञ्चमीकै दिन जनै लगाउनुपर्ने बताए । ‘साउन २३ गते......
हाईलाईट्सका कारण हुन सकेन सिड्नीमा ‘लुट २’ को शो
बहु प्रतिक्षित चलचित्र ‘लुट २’ हेर्ने सिड्नीबासी नेपाली दर्शकहरूको इच्छाा शुक्रबार पुरा हुन सकेन । नेपालमा पहिलो दिन नै आक्रामक ब्यापार गरेको चलचित्र लुट २ को सिड्नीमा पनि पहिलो शो को टिकट शोल्ड आउट भएको थियो । हलमा उक्त चलचित्र हेर्न आएका दर्शकहरूको भिड पनि बाक्लै थियो । तर ,बिडम्बना नेपालबाट......
प्रियंका पछि एलिसा राईलाई नचाउँदै ‘कार्टुन क्रिउज’ (भिडियो सहित)
पछिल्लो समय 'यूट्यूब' प्रतिभा प्रदर्शन गर्नको लागि गतिलो र सजिलो माध्यम बनेको छ । यूट्यूबमा अपलोड गरेको भिडियोको भिउअर बाट प्रतिभाको मुल्याङकन् हुने गरेको छ । यूट्यूबबाटै आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरेर सेलिब्रेटी बन्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् । कार्टुन क्रिउज नाम त सुन्नुभएको होला, डान्स पनि हेर्नुभएको......
“‘साईली’ लाई धेरै मेहेनत गरेको थिइन”
‘साईली’ लाई मेहेनत कति गर्नुभएको थियो ? मेहेनत भनेर एकदमै दिनरात लागिएन । मैले एकदुई टेकमै गाएको गीत हो यो । मलाई यो गीत गाउदा कुनै गाह्रो भएन । पूरै फिलिङ्समा डुबेर गाएँ । व्यवसायीकरुपमा गाउन जिम्मेवारी आएको रुपमा नलिएर मैले आनै गीत सम्झिएँ । कालीप्रसादजीले फाइनल कम्पोज गरिरहँदा कस्तो राम्रो रैछ......